Ny tanky fitehirizana cryogenika dia tanky fitahirizana volo misy sisiny avo roa heny ho an'ny fitehirizana oksizena, azota, argon, gazy karbonika ary media hafa. Ny lahasa lehibe indrindra dia ny mameno sy mitahiry ranon-javatra ambany maripana. Sokajy Tankina fitehirizana madinidinika, tanky fitehirizana mitsangana Ny tanky fitehirizana cryogenika dia fitoeram-pitrandrahana miendrika volo misy sosona avo roa heny ho an'ny fitehirizana oxygen oxygen, nitrogen, argon, carbon dioxide ary media hafa. Ny lahasa lehibe dia ny mameno sy ...
Tamboho fitehirizan-kriogenika marindrano Eo ambanin'ny fahaiza-manao sy ny tsindry mety indrindra, ny fitoeran-tsigara fitehirizana cryogenika rehetra dia avo lenta indrindra hamonjy vola sy hanafohezana ny fotoana fandefasana. Safidy maoderina maro azo alefa an-tariby omena hahafeno ny fepetra takian'ny fampiharana. Ny antsipirihany nampidirina Runfeng dia manome tanky fitehirizana entona mahazatra amin'ny tsipiriany roa, mitsangana sy mitsivalana, miaraka amin'ny tsindry miasa faran'izay 900 900 ka hatramin'ny 20 000 litatra (3.400 hatramin'ny 80.000 litatra). 175 hatramin'ny 500 psig (12 hatramin'ny 37 barg). Eo ambanin'ny capa ideal ...
Fampidirana ny tanky fitehirizan-kraônônika Ansuda Ansuda kely dia karazana fitaovana kely misy gazy miaraka amina fotony miorina sy tanka fitehirizan-jaza cryabatisika maro sosona adiabatic avo lenta ary ampiarahina amin'ny famenoana ranon-javatra cryogenika sy ny rafitra fanamafisana ny tena. Sokajy: Ansuda, tanky fitehirizana kely amin'izao fotoana izao, ny tanky fitehirizan-dronono cryogenika kely Ansuda, ho toy ny fomba famatsian-gazy vaovao tsotra sy mora soloina ireo varingarina vy sy Dewars, dia be mpampiasa amin'ny h ...
Ny firafitry ny tavoara dewar Ny tanky anatiny sy ny akorany ivelany an'ny Dewar dia vita amin'ny vy tsy misy fangarony, ary ny rafitra mpanohana tanky anatiny dia vita amin'ny vy tsy misy fangarony hanatsarana ny tanjaka ary hampihena ny fahaverezan'ny hafanana. Misy sosona insulated hafanana eo anelanelan'ny tanky anatiny sy ny akorandriaka ivelany. Fitaovana fanamafisana hafanana marobe sy sosona avo lenta miantoka ny fotoana fitehirizana rano. Vaporizer efa namboarina no namboarina tao anaty akorany hanovana ny ranon-javatra cryogenika ho lasa gazy, ary ireo ...
Ny firafitry ny tavoara Dewar Ny tanky anatiny sy ny akorany ivelany an'ny Dewar dia vita amin'ny vy tsy misy fangarony, ary ny rafitra mpanohana tanky anatiny dia vita amin'ny vy tsy misy fangarony hanatsarana ny tanjaka ary hampihena ny fihenan'ny hafanana. Misy sosona insulated hafanana eo anelanelan'ny tanky anatiny sy ny akorandriaka ivelany. Fitaovana fanamafisana hafanana marobe sy sosona avo lenta miantoka ny fotoana fitehirizana rano. Vaporizer efa namboarina no namboarina tao anaty akorany hanovana ny ranon-javatra cryogenika ho lasa gazy, ary ny ...
Ny firafitry ny tavoara Dewar Ny tanky anatiny sy ny akorany ivelany an'ny Dewar dia vita amin'ny vy tsy misy fangarony, ary ny rafitra mpanohana tanky anatiny dia vita amin'ny vy tsy misy fangarony hanatsarana ny tanjaka ary hampihena ny fihenan'ny hafanana. Misy sosona insulated hafanana eo anelanelan'ny tanky anatiny sy ny akorandriaka ivelany. Fitaovana fanamafisana hafanana marobe sy sosona avo lenta miantoka ny fotoana fitehirizana rano. Vaporizer efa namboarina no namboarina tao anaty akorany hanovana ny ranon-javatra cryogenika ho lasa gazy, ary ireo ...
Ny firafitry ny tavoara Dewar Ny tanky anatiny sy ny akorany ivelany an'ny Dewar dia vita amin'ny vy tsy misy fangarony, ary ny rafitra mpanohana tanky anatiny dia vita amin'ny vy tsy misy fangarony hanatsarana ny tanjaka ary hampihena ny fihenan'ny hafanana. Misy sosona insulated hafanana eo anelanelan'ny tanky anatiny sy ny akorandriaka ivelany. Fitaovana fanamafisana hafanana marobe sy sosona avo lenta miantoka ny fotoana fitehirizana rano. Ny vaporizer efa namboarina dia namboarina tao anaty akorany hanovana ny ranon-javatra cryogenika ho lasa gazy, ary ny ...
ST-10C iraisana iraisana
Valin-kelin'ny krizy cryogenika
Disk mahazatra (Slot type):
Ny kapila fandrefesana an-tsokosoko mahazatra dia misy faritra metaltop slotted ary famehezana famehezana: ny tsindry voalohany dia fehezin'ny faritra ambony loaka. Rehefa misy ny tsindry tafahoatra amin'ny rafitra voaaro, ny kapila dia mipoaka manaraka ireo tsipika efa voavolavola mba hanomezana aotra tanteraka. Karazan-tsarimihetsika boribory vita amin'ny volavolan-koditra (LF) boribory mahazatra natao ho an'ny serivisy gazy, rano, vovoka. Tsindry faran'izay betsaka hatramin'ny 80% n'ny tsindry faran'izay ambany indrindra. Sombiny vitsivitsy amin'ny burs ...